Home Wararka Somaliland oo marmarsiyo u raadinaysa musaafurinta dadka Koonfurta & raaf laga bilaabay...
Somaliland oo marmarsiyo u raadinaysa musaafurinta dadka Koonfurta & raaf laga bilaabay Hargeysa
Dowlada Somaliland ayaa sheegtay in magaalada Hargeysa ka bilaawday raafka ama qab qabashada qaar ka mid ah dadka ajaanibta ah, gaar ahaan Itoobiyaanka suuqyada dawarsada iyo kuwa shaqooyinka hoose qabta ee bilaa sharciga ah.
Talabadaan ayaa lagu sheegay mid marmarsiyo looga dhiganayo musaafurinta dadka ka yimid Koonfurta Soomaaliya. Si loogu meel dayo ceebta ka dhalaty talabaada ay qaaday dowlada Somaliland ayaa waxa hada la bilaabay in la sheegto in la raafiyo dadka Itoobiyaanka ah taas oo ah mid xaqiiqda ka fog. Muse Bixi ma laha awood uu dad Itoobiyaan ah uu kaga ceyriyo Somaliland sababta oo ah Somaliland waxa gacanta ku haya Itoobiya.
Dhanka kale, goobjoogayaal ayaa sheegay inay arkayeen ciidanka Somaliland oo waddooyinka Magaalada Hargeysa, kuwaas oo qab qabanaya Hooyooyin iyo dad kale oo da’ah ah, kuwaas oo u dhashay dalka Itoobiya, iyaga oo isugu geeynayay hal Goob si dalkooda loogu celiyo.
Ciidanka ammaanka ayaa waxa ay bilaabeen inay dadka ku qaadayaan basas waaweyn, waxaana howlgalkaaa Maanta siweyn looga dareemay Magaalada Hargeysa oo ay ku sugan yihiin Boqolaal kalenl oo Ajaanib ah, kuwaas oo qaarkood Shaqooyin waaweyn ka haaya.
Tallaabadaan ay ciidanka Somaliland ka bilaaneen magaalada Hargeysa ayaa kusoo aadaya xilli Somaliland dhawaan Magaalada laas-Caanood kasoo musaafuriyeen dad kasoo jeeda Koonfur Galbeed, iyaga oo sheegay inay u arkaan inay yihiin Ajaanib.